Al Shabaab oo Sheegtay in 6 Askari Ay Ku Dishay Qarax Ka Dhacay Deegaanka Galgala Ee Gobolka Bari.
Sunday April 23, 2017 - 12:23:18 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya gobolka Bari ayaa sheegaya in qarax khasaara xooggan dhaliyay lala beegsaday ciidamo katirsan maamulka 'Puntland' isku magacaabay.
Sawir Hore qarax gaari lagula beegsaday duleedka Boosaaso
Qarax aad u xoogan ayaa barqanimadii maanta duleedka magaalada Boosaaso lagula eegtay gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan Askarta maamulka Cabdi Wali Gaas iyadoona halkaas ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen tobaneeyo ka mid ah askartii la beegsaday.
Saraakiil katirsan Xarakada Al Shabaab ayaa Idaacadda Andalus ee Afka Xarakada Ku hadasha u sheegay in qaraxa lala eegtay gaari nooca dagaalka ah oo ay wateen maleeshiyaat ka tirsan maamulka ‘Puntland’ oo tiradooda lagu qiyaasay 20 Askari.
Gaariga labeegsaday ayaa kasoo amba baxay deegaanka Galgala wuxuuna kusii jeeday magaalada Boosaaso ee xarunta gobalka Bari
War rasmi ah oo kasoo baxay xarakada Al Shabaab ayay ku sheegtay in 6 Askari oo katirsanaa ciidamada maamulka 'Puntland' lagu dilay qaraxii maanta ka dhacay duleedka magaalada Boosaaso.
Weerarada qaraxyada ah ee lagu beegsanayo gaadiidka ciidamada PL ee isaga kala gudba magaalooyinka Boosaaso iyo Galgala ayaa waayadii dambe kusoo badanayay gobalka Bari, waxaana weeraradaasi ka dhashay khasaara isugu jira dhimasho iyo dhaawac.